“Mgbe ụfọdụ, ọ na-abụ m hụ ebe ụmụ okoro na agbọghọ nọkọtara ọnụ, mụ ana-eche, sị, ‘Chei, ndị a bụ nnọọ ezigbo ndị enyi. Achọrọ m inweta ụdị ndị enyi ahụ.’”—Joe.
“Ọ naghị ara m ahụ́ imeta ndị enyi n’ụlọ akwụkwọ. Ọ dịịrị m mfe. Ọ bụ ya bụ nsogbu m nwere.”—Maria.
MMADỤ niile chọrọ inwe ndị enyi, ya bụ, ndị ha na ha ga na-ekpori ndụ mgbe ihe dịịrị ha mma, ndị ga-agbatakwara ha ọsọ enyemaka mgbe ihe siiri ha ike. Jizọs nwere ndị enyi, obi na-adịkwa ya ụtọ ma ya na ha nọrọ. (Jọn 15:15) Mgbe Jizọs nọ na-anwụ n’elu osisi ịta ahụhụ, ezigbo enyi ya Jọn guzo nso. Ọ bụ ‘onye na-eso ụzọ ya ọ hụrụ n’anya.’ (Jọn 19:25-27; 21:20) Ị chọrọ ndị enyi dị otú ahụ, ya bụ, ndị enyi ga-anọ gị nso ma ihe ò siiri gị ike ma ihe ọ̀ dịịrị gị mma!
Ikekwe, obi gị na-agwa gị na i nwetala ndị enyi dị otú ahụ n’ụlọ akwụkwọ, ya bụ, otu nwa klas unu ma ọ bụ mmadụ abụọ ihe na-adabara gị na ha. Otu ụdị ihe na-amasị unu, obi na-adịkwa unu ụtọ mgbe unu na-akparịta ụka. Ọ na-adị gị ka gị na ha ịbụ enyi abụghị ‘mkpakọrịta ọjọọ.’ (1 Ndị Kọrịnt 15:33) Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Anne kwuru, sị: “Ọ fọrọ ntakịrị ka ọ bụrụ na ị na-ahụ ndị enyi gị ndị a kwa ụbọchị. N’ihi ya, ahụ́ na-eru gị ala ma gị na ha nọrọ. Ọ dịghị ka mgbe gị na Ndị Kraịst ibe gị nọ, bụ́ mgbe i nwere ike iche na i kwesịrị ịkpachapụ anya n’otú i si akpa àgwà. Ya bụrụ n’ụlọ akwụkwọ, ahụ́ na-eru gị ala.” I nwekwara ike lewe ihe anya otú otu nwa agbọghọ aha ya bụ Lois lere ya. O kwuru, sị: “Achọrọ m ka ndị enyi m mụ na ha nọ n’ụlọ akwụkwọ ghọta na Ndịàmà Jehova adịghị iche otú ndị mmadụ na-eche, gosikwa ha na anyị dị ka ndị ọzọ.” Ihe o chere ò kwesịrị ime ka gị na ụmụ akwụkwọ ibe gị bụrụ ezigbo enyi?
Chee echiche banyere ihe mere Maria, bụ́ onye a kpọrọ aha ná mmalite. Ihu ọchị ya mere ka ọ na-adịrị ya mfe imeta ndị enyi, meekwa ka ọ na-esiri ya ike ịmata ụdị ndị ya na ha na-ekwesịghị ịkpa. O kwuru, sị, “Obi na-atọ m ụtọ ma ụmụ okoro na agbọghọ na-ahụ m n’anya. N’ihi ya, eji m nke nta nke nta na-abanye ná nsogbu ụwa a yiri pọtọpọtọ.” Ụdị ihe ahụ mere Lois. O kwuru, sị: “Amụtara m àgwà ndị enyi m. Amalitere m ịkpa àgwà otú ha si akpa.”
Ihe ahụ merenụ abụghị ihe ijuanya. A sị ka e kwuwe, ka gị na mmadụ bụrụ ezigbo enyi, ihe na-amasị ya ga na-amasị gị, àgwà gị na ya ga-abụkwa otu. Ọ bụrụ na ndị ị na-agbalị ka gị na ha bụrụ ezigbo enyi bụ ndị na-ekweghị n’ihe i kweere, ya bụ, ihe Baịbụl kwuru, ọ ga-emetụtarịrị àgwà gị. (Ilu 13:20) Ọ bụ ya mere Pọl onyeozi ji dee, sị: “Unu na ndị na-ekweghị ekwe ekekọtala onwe unu, nke bụ́ nkekọ na-ekwekọghị ekwekọ.”—2 Ndị Kọrịnt 6:14.
Ndụmọdụ Pọl ọ̀ pụtara na i kwesịrị ịna-agbara ụmụ klas unu ọsọ ma na-agara onwe gị? Mbanụ! Ọ bụrụ na Ndị Kraịst ga-emezu iwu ahụ e nyere ha nke bụ́ ‘ime ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ Jizọs,’ ha kwesịrị ịmata otú ha na ndị si n’agbụrụ niile, okpukpe niile, na mba niile ga-esi na-emekọ ihe.—Matiu 28:19.
Pọl onyeozi setịpụrụ ihe nlereanya magburu onwe ya na nke a. Ọ ma otú e si agwa “ụdị mmadụ niile” okwu, n’agbanyeghị na ya na ha anaghị ekpe otu okpukpe. (1 Ndị Kọrịnt 9:22, 23) I nwere ike iso ihe nlereanya Pọl. Gị na ndị ọgbọ gị dịrị ná mma. Mụta otú gị na ha ga-esi na-akparịta ụka nke ọma. Otú ọ dị, eṅomila omume ụmụ klas unu na otú ha si ekwu okwu. Kama nke ahụ, meda obi kọwaara ha ozugbo ihe mere i ji kpebie ime ihe Baịbụl kwuru.—2 Timoti 2:25.
N’eziokwu, ọ ga-eme ka ị dị iche, ọ dịghịkwa mfe ime ya eme. (Jọn 15:19) Ma, sigodị otú a lee ya anya. Ọ bụrụ na ị nọ n’ụgbọ epeepe e ji agụpụta ndị mmiri na-eri, olee otú ị ga-esi enyere ha aka n’ezie? Ọ̀ bụ ịhapụ ụgbọ ahụ maba n’ime mmiri? Mbanụ!
N’otu aka ahụ, ndị gị na ha nọ n’ụlọ akwụkwọ amaghị uru ịbụ enyi Jehova bara. (Abụ Ọma 121:2-8) Ọ bụrụ na ị hapụ iwu Jehova n’ihi na ị chọrọ ka gị na ụmụ klas unu bụrụ enyi, ọ ga-eme ka gị na Chineke ghara ịdị ná mma, meekwa ka ị ghara inwe obi ụtọ. (Ndị Efesọs 4:14, 15; Jems 4:4) Ọ ka mma ka ị gbalịa nyere ụmụ klas unu aka ịbata n’ụgbọ ihe atụ ahụ e ji azọpụta ndụ site n’igosi ha otú ha ga-esi fee Jehova. N’ezie, o nweghị ụzọ ka nke ahụ mma ị ga-esi gosi na ị bụ ezigbo enyi.
“Ana m eme ihe niile n’ihi ozi ọma, ka m wee bụrụ onye na-ezisara ya ndị ọzọ.”—1 Ndị Kọrịnt 9:23.
Ọ bụrụ na ụfọdụ ụmụ klas unu achọọ ịma ihe i kweere, hapụ ha ka ha kwuo echiche ha. Gee ha ezigbo ntị. Mgbe ị chọrọ ikwu okwu, jiri “obi dị nwayọọ na nkwanye ùgwù dị ukwuu” kwuo okwu.—1 Pita 3:15.
Ọtụtụ ndị na-efe Chineke taa mụtara ihe Baịbụl na-ekwu site n’aka nwa klas ha katara obi kọọrọ ha ihe o kweere.
Ọ bụrụ na ọ dị m ka mụ na nwa klas anyị akpachiwala anya, ihe m ga-eme bụ ․․․․․
Ọ bụrụ na nwa akwụkwọ ibe m achịa m ọchị n’ihi ihe m kweere, ihe m ga-eme bụ ․․․․․
● Gịnị mere o ji yie gị ka ọ̀ dị mfe imeta ndị enyi n’ụlọ akwụkwọ karịa n’ọgbakọ Ndị Kraịst?
● Olee nsogbu ị ga-enweta ma gị na nwa klas unu na-ekweghị ekwe na-anọ mgbe a gbasachara ụlọ akwụkwọ?
● Olee uru ọ ga-abara gị ma ị gwa ụmụ klas unu na ị bụ Onyeàmà Jehova?
[Ihe odide gbatụrụ okpotokpo nke dị na peeji nke 143]
“Anaara m akpa àgwà otú ụmụ akwụkwọ ibe m si akpa, nke mere ka ọ dịrị m mfe imeta ndị enyi. Ma m mụtara ihe n’ihe ndị ahụ m mejọrọ. Ugbu a, enweela m ndị enyi n’ọgbakọ, ya bụ, ndị enyi m nwere ike ịtụkwasị obi.”—Daniel
[Foto dị na peeji nke 146]
Olee otú kacha mma ị ga-esi enyere onye mmiri na-eri aka? Ọ̀ bụ ịmaba ná mmiri ahụ ka ọ̀ bụ inye ya ihe ọ ga-eji pụta?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Ihe M Kwesịrị Ịma Banyere Imeta Ndị Enyi n’Ụlọ Akwụkwọ?
yp2 isi 17 p. 142-146